Aqoonta ku saabsan Samsung Sidesync | Samsung Sidesync software
Waa maxay Samsung Sidesync?
Sida loo isticmaalo Samsung Sidesync
Isticmaalka Samsung Sidesync
Phone Sharing Screen
Function kale ee Samsung Sidesync aad ka ogaato
Samsung Sidesync si fudud loo qeexi karaa sidii xal ugu dambeeyay PC-Mobile kaas oo fududeeyey qaybsiga daaqadaha, shaashadaha iyo sidoo kale macluumaadka u dhexeeya mashiinka PC ama laptop iyo Samsung Android phone ama kiniin. Dhaqangelinta technology waxa uu si weyn u galisay PC iyo telefoonada Smart adduunka tan iyo xiriirka ka dhexeeya qalabka ayaa si sahlan. Samsung Sidesync oggol yahay:
Iyadoo Samsung Sidesync, way fududahay in la isticmaalo noocyada kala duwan ee barnaamijyadooda ku saabsan qalab Samsung Android ka screen laptop ama PC. Qoraalka ama farriimo ku saabsan qalab Samsung Android waxaa lagu soo bandhigaa shaashadda laptop ama PC. Waxaa intaa dheer, user telefoonka si fudud u jawaabi kartaa fariimaha la isticmaalayo PC ama laptop ah.
Telefoonada Smart shaqaaleeyaan isticmaalka screens taabto. Samsung Sidesync u ogolaataa user ay u isticmaalaan isaga ama iyada Samsung Android phone dhex mouse iyo keyboard ee laptop ama PC aan daruuri isticmaalaya keyboard taabashada uu ama telefoonka. Marka la soo koobo, user ayaa awood u farriimaha ka diray telefoonka by laptop ama PC keyboard ah ugu xiran.
Ka hor inta la isticmaalayo Samsung Sidesync, waxaad u baahan tahay in marka hore laga soo dajiyo. Waxaa xusid mudan in ay kaliya ku shaqeeyaan taleefannada iyo kombuyuutarada ama kumbiyuutarada la macmalay oo ay Samsung.
Sida hore u soo sheegnay, waa khasab in ay gashato aad laptop ama PC si ay u bilaabaan la wadaago macluumaadka, daaqadaha ama shaashadaha. Sidoo kale, waxaad u baahan tahay in ay soo booqdaan Samsung Apps iyo download Phone Sharing Screen iyo sidoo kale barnaamijyadooda Sidesync oo iyaga loo soo dajiyo ku saabsan telefoonka.
Iyada oo update SW, waxaad si fudud u sharrixi kara iyo gashato Samsung Sidesync aad laptop ama PC. Iyo sidoo kale aad u cusbooneysiin karaa software si ay version ugu dambeeyay iyadoo la isticmaalayo SW Update.
Marka hore, ordo SW Update
Ku rakib Sidesync Samsung ah (si fudud in aad ka raadin kartaa barnaamijka
Cusboonaysii software ah adigoo gujinaya 'Update' si aad u hesho ay version ugu dambeeyey
Waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado in aad u baahan tahay in la qabto account Samsung ama haddii aadan haysan mid, Soo Iibsan Doonto dejisan iyo rakibi app ee casriga ah. Waxa kale oo aad ikhtiyaar ah oo si toos ah rakibidda Chine gaar ahaan haddii aad tahay dal aan la taageeray by Samsung. All inaad samayso waa booqo website-ka rasmiga ah iyo soo baxdo iyo rakibi barnaamijyadooda ka.
Markii si toos ah rakibidda barnaamijyadooda si aad qalab Samsung Android, waxaad u baahan tahay in ay maamulaan barnaamijyadooda ku saabsan telefoonka. Isticmaalka doorasho raadinta, nooca 'sidesync Samsung' si ay u soo bixi oo ku xidh. Sidoo kale, nooca 'Phone Screen Sharing' on doorasho raadinta inay soo baxdo iyo rakibi barnaamijka.
Connect telefoonka Samsung Android oo aad PC ama laptop la cable USB. Waxaa muhiim ah in la ogaado in nidaamka ma shaqayn doonaan haddii aad isku mar shaqaaleeyaan Phone Sharing Screen iyo keyboard / Mouse Hababka.
Wi-Fi sidoo kale noqon kartaa mid waxtar leh marka xira laptop ama PC in telefoonka. Xaaladii network doorbiday waa in ay ahaataa AP iyo sidaas, taleefanka si fudud ayaa loogu xidhi karaa iyada oo loo marayo AP ee la mid ah.
Haddii aad rabto in aad isticmaasho qalabka Samsung Android la keyboard / Mouse qaybsiga markaas waa inaad marka hore soo dajiyo app sidesync telefoonka.
Ka dib markii ay si guul ah ku rakibidda barnaamijka aad laptop ama PC tallaabada xigta aan la hubiyo in uu jiro xiriir ka dhexeeya aad telefoon iyo PC ama laptop ah. Hubi in xidhiidhka ka dhamaato adigoo isticmaalaya cable USB ama Wi-Fi ka dibna dooro keyboard button / Mouse Sharing ay u bilaabin isticmaalka muujinta ah. Guul xiriir A waxaa dhaliyay xiriir ogeysiis ah oo aad si raaxo leh u isticmaali kartaa mouse iyo keyboard in ay u diraan ama soo jawaabin qoraalka aan ku tiirsan telefoonka.
Haddii aad rabto in aad si loo hubiyo in habkaani markaas marxaladda hore ee aad u baahan tahay in aad maskaxda ku hayso waxaa degsado iyo ku rakibidda app Phone Screen Sharing ee ku saabsan qalabka android Samsung iyo sidoo kale degsado iyo ku rakibidda barnaamijka sidesync Samsung.
Mar kale, waa in aad la rakibi barnaamijka sidesync Samsung aad laptop ama PC. Sidoo kale, waxaad u baahan tahay si loo hubiyo in uu jiro xiriir u dhexeeya guul aad casriga ah iyo laptop ama computer midkood cable USB ama Wi-Fi. Marka la xidhiidha waa guul, fariin ogeysiis la soo bandhigay sidaa darteed, waxaad bilaabi kartaa riyaaqayaa habkaani
Waxaa sugan, Samsung Sidesync waa barnaamij weyn ayaa ka hadlay sida ay haykalkeeda casriga badan sida qalabka ugu fiican ee la wadaago daaqadaha, xogta ama macluumaadka iyo screens dhexeeya a laptop / PC iyo casriga ah Samsung. Kuwa soo socda waa hawlaha kale ee Samsung Sidesync waa inaad iska jirtaa:
1. Auto raad raac ah oo files on qalabka android Samsung. Habkaani waxaa lagu taageeray oo kaliya haddii aad soo bixi oo lagu rakibay Kies.
2. Iyadoo barnaamijka, sidoo kale si fudud kuu soo diri karaan faylasha ka PC ama Laptop in telefoonka. Just dooro faylasha aad rabto in aad ka dibna soo dir jiidi oo iyaga hoos u shaashadda telefoonka.
3. Sidoo kale, waxaad soo diri kartaa files ka taleefanka si computer ama laptop. Just dooro faylasha aad rabto in aad soo dirto ka dib markii rakibidda app "My Files 'oo iyaga la wadaago via Sidesync.
Sida loo isticmaalo Google Haddaba Device Android
> Resource > Android > aqoonta ku saabsan Samsung Sidesync